प्रकृतिको अनुपम उपहार तिलिचो ताल ! - Pokhara News
प्रकृतिको अनुपम उपहार तिलिचो ताल !
२१ जेष्ठ २०७६
पोखरा न्यूज – २१, जेठ । गत हप्ता तिलिचो ताल पुगेका खोटाङ हलेसीका ४६ वर्षीय नयन कुमार राई औधी खुशी छन् । यहाँ आएर जुन आनन्दको अनुभूति गर्न पाए त्यसबाट उनी सन्तुष्ट छन् । उनी भन्छन् – “चार दिनसम्म तिलिचो ताल छेउमा रात बिताउँदा निकै आनन्दित भएँ । मैले स्वर्गीय आनन्द नै प्राप्त गरेको छु ।”
असोज–कात्तिक महिनामा नीलो रङ्गको सङ्ग्लो पानी
ताल पुग्नुअघि यतिखेर १५ देखि २० मिनेट हिउँमा पनि यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, ठाउँ ठाउँमा हिमपहिरो खस्ने समेत खतरा बढेको छ । त्यस्तो ठाउँमा सावधानी अपनाएर हिड्नुपर्ने हुन्छ । उच्च लेक लाग्ने संम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । अनि तालमा पुगेपछि सबै कष्टहरु भुल्ने गरेको पर्यटकहरु बताउँछन् ।
उपल्लो मनाङबाट साढे दुई घण्टाको पदैल यात्रापछि खाङसार गाउँ पुग्न सकिन्छ । खाङसार गाउँबाट करीव ५ घण्टाको पैदल यात्रापछि तिलिचो तालको आधार शिविरसम्म पुग्न सकिन्छ । आधार शिविर पुग्नुभन्दा अगाडिको बाटोको पैदल यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यो बाटो हिँड्दा निकै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । छिनछिनमा धुले (सुख्खा) पहिरो खस्ने, कतै हिमपहिरो खस्ने, साँघुरो सडकले यात्रालाई निकै कष्टकर बनाउँछ ।
तालको आधार शिविरमा पुगेपछि त्यही बास बस्नुपर्छ । भोलिपल्ट बिहानै पदमार्गबाट ४ देखि साढे ४ घण्टाको समयमा तिलिचो ताल पुग्न सकिन्छ । पश्चिम, दक्षिण र उत्तर दिशामा सेताम्य हिमालले घेरेको तिलिचोमा अहिले पुग्दा मानौँ कि ताल हिउँसँगै मुस्कुराइरहेको भान हुन्छ ।
स्याङ्जामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ